Ulo oru nlegha anya n’iru n’iru n’iru
Ngwongwo Refractory na-ekwu maka ihe ndị na-abụghị sọka ka ihe eji eme ya karịa na 1580 ℃ ma nwee ike iguzogide mgbanwe anụ ahụ na kemịkal dị iche iche na mmetụta ọrụ. Nyocha banyere ọnọdụ mmepe nke ụlọ ọrụ na-emepụta refractory. Ntughari ihe di nkpa…
N'afọ 2019, ụlọ ọrụ na-emegharị emepe ga-akwalitekwu mmezigharị usoro nhazi. Ọrụ niile nke ụlọ ọrụ ahụ kwụsiri ike, nsonaazụ amụbawanye nwa ntakịrị, ogo etolitelarịrị akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ esiwanyela nke ọma. 1. Mmepụta a na-akwụ ọtọ ma na-arị elu. N’afọ 2019, ihe arụpụtara…
Mkpokọta nke ndị China na-ebupute electrodes ndị na-ese ihe dị 46,000 na Jenụwarị-Febụwarị 2020
Dabere na data kọstọm, mbupụ ndị China weputara ihe ndị na-emepụta graphite bụ 46,000 na Jenụwarị - Febụwarị 2020, mmụba nke afọ nke 9.79%, ọnụ ahịa mbupụ ya bụ dollar US 159,799,900, ọnụego otu afọ na 181,480,500 US dollar. Kemgbe 2019, ọnụahịa China niile…
Carbon electrode bụ ngwaahịa anyị bụ isi
Carbon electrode bụ ngwaahịa anyị bụ isi. Na mgbakwunye, ụlọ ọrụ anyị na-arụpụta ma na-enye ụdị dị iche iche na nkọwapụta nke elektrik na-egosipụta eserese na njikọta electrode iji gboo mkpa nke ọtụtụ ndị ọrụ. Agbanyeghị, maka ọtụtụ ndị ọrụ, ha ghọtara naanị ihe ...